Umaka: ungayiklama kanjani i-win back email
Abathengisi abaningi basebenzela ukuthola, ukukhula, ukugcina amasu. Thola amakhasimende, khulisa amakhasimende futhi ugcine amakhasimende. Ngemuva kokuya engqungqutheleni yeWebtrends, ngiphinde ngafunda ukuthi ukubuyisa amakhasimende wangaphambili isu elihle kakhulu. Selokhu ngaya engqungqutheleni, bengilokhu ngibheke iso lami ngomkhankaso wokuzibandakanya kabusha noma wokuthola kabusha. Muva nje, ngibulale i-akhawunti yami engenantambo iBoingo. Isevisi isebenze kahle futhi inohlelo lokusebenza oluvelele lwe-iPhone oluxhume noma yisiphi isikhumulo sezindiza esibambe iqhaza ekuthintweni kwesikrini. Mina